केन्द्रीय समितिक ९९ सदस्यीय बनाउने ओली-प्रचण्ड सहमति ! पोलिटव्यूरो र स्थायी समिति सदस्य कति ? — SuchanaKendra.Com
केन्द्रीय समितिक ९९ सदस्यीय बनाउने ओली-प्रचण्ड सहमति ! पोलिटव्यूरो र स्थायी समिति सदस्य कति ?
काठमाडौं एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति ९९ सदस्यीय बनाउन सहमत भएका छन् । अंग्रेजी दैनिक पत्रिका द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड २ अंकको केन्द्रीय समिति बनाउन सहमत भएका हुन् ।
हाल एमालेमा दुई सय र माओवादीमा करिव चार हजार केन्द्रीय सदस्य छन् । हिजो ललितपुरमा भएको ‘वान टू वान’ संवादमा ओली र प्रचण्ड पार्टी अन्तरिम विधान, राजनीतिक दस्तावेज र अन्तरिम संगठनात्मक ढाँचा बनाउन कार्यदल बनाउन पनि सहमत भएका छन् ।
सामन्य त कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटव्यूरो केन्द्रीय समितिको एक तिहाई हुन्छ । यदि ९९ सदस्य केन्द्रीय समिति बन्यो भने ३३ जनाको पोलिटव्यूरो हुनेछ र ११ जनाको स्थायी समिति बन्ने छ ।
पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्दै
पार्टी एकीकरण र सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न एमाले–माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ ।दिउँसो दुई बजेपछि समितिको बैठक बस्ने स्रोतले जनाएको छ । संयोजन समितिको बैठक बस्नु अगाडि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पुनः भेटवार्ता हुने बताइएको छ ।
पार्टी एकीकरणका लागि नजिक पुगेका ओली र दाहालले संयोजन समितिबाट सो विषयलाई टुंग्याउने पक्षमा देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार वैचारिक र सांगठनिक विषयमा सहमति जुटाउन संयोजन समितिले दुईवटा कार्यदल बनाउने तयारी समेत भएको छ ।
यसअघि ओली-प्रचण्डबीच मंगलबार पनि ‘वान टू वान’ वार्ता भएको थियो । ललितपुरको मानभवनमा भएको दुई नेताबीचको वार्तामा पार्टी एकता र शक्ति बाँडफाँडमा अन्तिम सहमति जुटाउनेबारे छलफल भएको थियो । ।
वार्तामा दुई नेताले बुधबार २ बजे पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने र बैठकमार्फत पार्टी एकताको टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो । पार्टी एकताको टुंगो लगाउने निर्णयसँगै चिसिन लागेको २ पार्टीबीचको एकताले एकाएक रफ्तार लिने देखिएको छ । जसकारण निरास बनेका एकताका पक्षधर एमाले-माओवादी नेताकार्यकर्ताहरुमा खुसी छाएको छ ।
एकता टुंगिए पनि दुई दलको हैसियतमै सरकार बन्ने
एमाले–माओवादी एकता प्रयास अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । तर, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले बुधवार राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि सुरु हुने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भने दुई दल सम्मिलित सरकारको रुपमा नै हुने देखिएको छ ।